နှစ် (၆ဝ) အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ခြေစစ်ပွဲ မအောင်ခဲ့တဲ့ အီတလီလက်ရွေးစင်အသင်း
14 Nov 2017 . 11:58 AM
အီတလီလက်ရွေးစင်အသင်းဟာ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့မှာ ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားရှုံးထွက်ပွဲမှာ သရေကျပြီး ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ခြေစစ်ပွဲကျရှုံးခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ (၁ဝ) ရက်နေ့က ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပထမအကျော့မှာ အီတလီအသင်းက ၁ဂိုး ဂိုးမရှိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကျော့မှာ သရေသာ ရယူနိုင်ခဲ့လို့ အခုလို ထွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီအသင်းဟာ ၁၉၅၈ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ခြေစစ်ပွဲမအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နှစ် (၆ဝ) အတွင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ် ခြေစစ်ပွဲမအောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ကာလို တာဗက်ချီယို (Carlo Tavecchio) ကလည်း ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ခြေစစ်ပွဲမအောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ပရိသတ်ကြီးကို တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားပါတယ်။ အီတလီအသင်းနည်းပြကြီး ဂီယန်ပီရို ဗန်တူရာ (Gian Piero Ventura) ဟာ ခြေစစ်ပွဲမအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အသင်းမှ နှုတ်ထွက်သွားပြီလို့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်က မနှုတ်ထွက်ပါဘူးလို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အီတလီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က သူ့ကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်မယ့် အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။
အီတလီအသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမအောင်မြင်တဲ့ အကျိုးဆက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဝါရင့်ဂိုးသမားကြီး ဘူဖွန် (Buffon) ဟာလည်း နိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်မှ အနားယူခဲ့ပြီလို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အီတလီအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမအောင်မြင်လိုက်တာက ဘူဖွန်အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲငါးကြိမ်ဆက်တိုက် ကစားဖူးတဲ့ ကစားသမားစံချိန်ကို တင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘူဖွန်ဟာ ၂ဝဝ၂ကမ္ဘာဖလား၊ ၂ဝဝ၆ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ၂ဝ၁ဝကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ၂ဝ၁၄ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖူးတဲ့ ဂိုးသမားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၃၉) နှစ်ရှိတဲ့ ဂိုးသမားကြီးအနေနဲ့ ၂ဝ၂၂ကမ္ဘာ့ဖလားဆိုတာ မရေရာတော့တဲ့ အနေအထားပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အနားယူခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ သရေပွဲအပြီးမှာ (၃၃) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်နောက်ခံလူ ချီလီနီ (Chiellini) ၊ (၃၆) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ နောက်ခံလူ ဘာရာဂလီ (Barzagli) နဲ့ (၃၄) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဒီရော့စီ (De Rossi) တို့လည်း အနားယူသွားပါတယ်။ ဂါးရက်ဘေးလ် (Gareth Bale) ၊ အာဂျန်ရော်ဘင် (Arjen Robben) ၊ အလက်ဆစ်ဆန်းချက် (Alexis Sánchez) ၊ အာတူရိုဗီဒယ် (Arturo Vidal) ၊ အန်တိုနီယိုဗလင်စီယာ (Antonio Valencia) နဲ့ ဒေးဗစ်အယ်လာဘာ (David Alaba) တို့လို နာမည်ကျော်တွေအပြင် ဘူဖွန်၊ ဘိုနူချီ (Bonucci) တို့လို ဂန္တဝင်ကစားသမားတွေလည်း ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နှဈ (၆ဝ) အတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျခွစေဈပှဲ မအောငျခဲ့တဲ့ အီတလီလကျရှေးစငျအသငျး
အီတလီလကျရှေးစငျအသငျးဟာ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ (၁၃) ရကျနမှေ့ာ ဆှီဒငျအသငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားရှုံးထှကျပှဲမှာ သရကေပြွီး ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ခွစေဈပှဲကရြှုံးခဲ့ပါတယျ။ နိုဝငျဘာလ (၁ဝ) ရကျနကေ့ ဆှီဒငျနိုငျငံမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပထမအကြော့မှာ အီတလီအသငျးက ၁ဂိုး ဂိုးမရှိ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး ဒုတိယအကြော့မှာ သရသော ရယူနိုငျခဲ့လို့ အခုလို ထှကျခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ အီတလီအသငျးဟာ ၁၉၅၈ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ခွစေဈပှဲမအောငျဖွဈခဲ့ပွီး နှဈ (၆ဝ) အတှငျးမှာ ဒုတိယအကွိမျ ခွစေဈပှဲမအောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အီတလီဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျဥက်ကဌ ကာလို တာဗကျခြီယို (Carlo Tavecchio) ကလညျး ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ခွစေဈပှဲမအောငျဖွဈသှားတဲ့အတှကျ ပရိသတျကွီးကို တောငျးပနျပါတယျဆိုတဲ့အကွောငျး ဖှငျ့ဟပွောဆိုသှားပါတယျ။ အီတလီအသငျးနညျးပွကွီး ဂီယနျပီရို ဗနျတူရာ (Gian Piero Ventura) ဟာ ခွစေဈပှဲမအောငျဖွဈခဲ့ပွီး အသငျးမှ နှုတျထှကျသှားပွီလို့ သတငျးထှကျပျေါခဲ့ပမေယျ့ သူကိုယျတိုငျက မနှုတျထှကျပါဘူးလို့ ပွောဆိုထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အီတလီဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျက သူ့ကို ရာထူးမှ ထုတျပယျမယျ့ အနအေထားမှာ ရှိပါတယျ။
အီတလီအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမအောငျမွငျတဲ့ အကြိုးဆကျတဈခုအနနေဲ့ ဝါရငျ့ဂိုးသမားကွီး ဘူဖှနျ (Buffon) ဟာလညျး နိုငျငံတကာလကျရှေးစငျမှ အနားယူခဲ့ပွီလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ အီတလီအသငျး ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမအောငျမွငျလိုကျတာက ဘူဖှနျအတှကျ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲငါးကွိမျဆကျတိုကျ ကစားဖူးတဲ့ ကစားသမားစံခြိနျကို တငျနိုငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘူဖှနျဟာ ၂ဝဝ၂ကမ်ဘာဖလား၊ ၂ဝဝ၆ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ၂ဝ၁ဝကမ်ဘာ့ဖလားနဲ့ ၂ဝ၁၄ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲတှမှော ပါဝငျဖူးတဲ့ ဂိုးသမားကွီးဖွဈပါတယျ။ အသကျ (၃၉) နှဈရှိတဲ့ ဂိုးသမားကွီးအနနေဲ့ ၂ဝ၂၂ကမ်ဘာ့ဖလားဆိုတာ မရရောတော့တဲ့ အနအေထားပါ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး အနားယူခဲ့ဟနျတူပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဆှီဒငျအသငျးနဲ့ သရပှေဲအပွီးမှာ (၃၃) နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ဝါရငျ့နောကျခံလူ ခြီလီနီ (Chiellini) ၊ (၃၆) နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ နောကျခံလူ ဘာရာဂလီ (Barzagli) နဲ့ (၃၄) နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ကှငျးလယျလူ ဒီရော့စီ (De Rossi) တို့လညျး အနားယူသှားပါတယျ။ ဂါးရကျဘေးလျ (Gareth Bale) ၊ အာဂနျြရျောဘငျ (Arjen Robben) ၊ အလကျဆဈဆနျးခကျြ (Alexis Sánchez) ၊ အာတူရိုဗီဒယျ (Arturo Vidal) ၊ အနျတိုနီယိုဗလငျစီယာ (Antonio Valencia) နဲ့ ဒေးဗဈအယျလာဘာ (David Alaba) တို့လို နာမညျကြျောတှအေပွငျ ဘူဖှနျ၊ ဘိုနူခြီ (Bonucci) တို့လို ဂန်တဝငျကစားသမားတှလေညျး ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲမှာ မွငျတှရေ့မှာ မဟုတျပါဘူး။
by Htet Htet . 12 hours ago
by yoelu . 12 hours ago